Boqorka Sacuudiga oo laga yaabo inuu bedelo dhaxalsugaha Amiir Maxamed… – Hagaag.com
Boqorka Sacuudiga oo laga yaabo inuu bedelo dhaxalsugaha Amiir Maxamed…
Posted on 26 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Boqorka Sacudi Carabiya Boqor Salman ayaa laga yaabaa inuu bedelo dhaxalsugaha Amiir Maxamed si uu u soo celiyo sharafta iyo karaamada Boqortooyada xilli ay soo wajahday qalalaase ka dhashay dilkii Jamal Khashoggi.
Jariirada DailyMail ayaa ka soo xigatay U qeybsanihii hore arrimaha Milatariga dowlada Britain dalalka Boqortooyada Sacudi Carabiya iyo Yemen,Colonel Brian Lees “Maalmaha uu xilka sii haynayo dhaxalsugaha Boqortoyada Sacudi Carabiya aad u yar tahay aabihiina Boqor Salman waxaa laga yaabaa inuu ka fekerayo sidii uu u bedeli lahaa kadib sumcad darada ka soo gaartay boqortooyada dilka Jamal Khashoggi.”
Dhaxalsuge Maxamed Bin Salman oo ah wiilka uu carruurtiisa ugu jecel yahay Boqor Salman oo 82 sano jir ah ayaa wajahaya eedeymo ah inuu ka dambeeyay dilkii Jamal Khashoggi.
Waxaana uu dhaxalsugaha oo doonaya inuu meel iska saaro arrintan dilka Khashoggi ayaa dambi oogayaasha Sacudi Carabiya waxa ay sheegeen in dilka saxafiga uu ahaa mid la sii qorsheeyay dadkii ka dambeeyayna su’aalo la weydiinayo.
Colonel Lees oo hore u qoray buug ka hadlayay qoyska boqortooyada Al Sacuud ayaa aaminsan in aan la awoodin in hadda la yiraahdo dhaxalsugaha waa dambiile balse Boqorka uu haysto sabab uu ugaga qaado xilka dhaxalsugaha qaladaadka badan oo uu galay mudadii koobneyd ee awoodda lagu aaminay.
“Ma aha mid lagu deg-degi karo xil ka qaadista xitaa bilaha soo socda ma dhacayso sababtoo ah taas waxa ay u muuqanaysaa in boqortooyada ay aqbashay eedeymaha loo soo jeediyay.”ayuu yiri Colenel Lees
Madaxweynaha Maraykanka Trump oo si weyn u aaminsanaa Dhaxalsugaha ayaa kamid ah haatan dadka ka aamin baxay waxana uu sheegay dhowaan in ay tahay in la ciqaabo ciddii ka dambeysay amarka lagu diley Jamal Khashoggi isagoo ula jeeday dhaxalsuge amiir Maxamed.
Si kasta ha ahaatee dhaxalsugaha ayaa ku tilmaamay falkii lagu khaarijiyay saxafiga Khashoggi mid bahalnimo ah oo ciddii ka dambeysana loo ciqaabi doono.